Manamboatra toekarena ny valan-javaboahary Venezoeliana - Blog bilaogy Ellicott
Source: Fanatanjahantena an-tany sy fanamboarana an-dranomasina
Angamba ny iray amin'ireo ohatra maodely misy ny fiatraikany mivantana amin'ny dredging amin'ny firoboroboan'ny firenena iray toekarena dia azo jerena ao Venezoela. Ny fitrandrahana fikojakojana fikojakojana isan-taona ao amin'ny Farihy Maracaibo sy amin'ny Ony Orinoco dia nihoatra ny 70 tapitrisa metatra toratelo. Maherin'ny 70% ny vokatra nasionalin'i Venezoela dia avy amin'ny solika nalaina avy amin'ireo faritra nipetraka teo ambanin'ny farihin'i Maracaibo, ka nahatonga ny fifamoivoizana an-tsokosoko tao anaty sambo sy ivelan'ny Farihy.
Ny Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) dia manana andraikitra, amin'ny maha masoivohon'ny governemanta azy, ny injeniera sy manao ny fikarohana sy ny injeniera momba ny dredging sy mifandraika amin'ny ranomasina sy seranan-tsambo, seranan-tsambo, lalan-drano ary farihy. Ny INC dia mitazona ny fiaramanidina dredging azy manokana ary ny fifanarahana amin'ny dredging fanampiny avy amin'ny mpiantoka tsy miankina raha ilaina izany.
Ny INC dia noforonina mba hitantana fandaharan'asa fanondrahana vaovao hanalalina ny fantsom-pifamoivoizana an'i Lake Maracaibo amin'ny halavany 11 tongotra mankany amin'ny halalin'ny tongotra 35. Talohan'izay ny orinasa tsy miankina solika miasa any amin'ny farihy Maracaibo dia efa nanao fifanarahana tamin'ny fandotoana rehetra.
Ho fanampin'ny asa mitohy amin'ny fikojakojana ny fantsona amin'ny fantsona Lake Maracaibo, ny INC dia namerina ny faritra indostrialy vaovao eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i Tablazo. Ao amin'ny El Tablazo, ny Instituto Venezolano de Petroquimica (IVP) an'ny fanjakana dia loharanom-panatanterahana ny tetik'asa - manomana ny toerana, manome ny fitaovana hanomezana fitaovana sy akora, fananganana fehezam-bolo ary ireo singa petrokimia izay ho vato fehizoron'ny fahasarotana .
El Tablazo dia niforona tamin'ny dingana roa. Ny fitambaran'ny famatsiam-bola ho an'ny complexe dia $ 1.2 miliara.
Ny fanarenana dredging dia nataon'ny dredge “Esequibo", Marika Ellicott® suction cutterhead 20-inch dredger fandroahana natsangana tamin'ny taona 1969 ho an'ny INC.
Mba hanafainganana ny fahavitan'ny Tetikasa Tablazo, nanapa-kevitra ny INC fa hividy dredge fanampiny, singa 36 ″ (914mm) ary nanome ny baiko ho an'ny Ellicott International of Baltimore. Ilay dredge dia nantsoina hoe “Carabobo ”taorian'ny ady malaza ho an'ny fahaleovan-tenan'i Venezoeliana. Nentina nankany amin'ny toerana misy ny Tetikasa Tablazo ny Carabobo hanombohana sy hamita ny asa fanamboarana ny orinasa petrochemical. Ellicott dia nanolotra ekipa manam-pahaizana efatra momba ny fanovozana dredging hahita ny Tetikasa Tablazo ary hiantohana ny fihaonana amin'ny ampahany amin'ny insentif / sazy amin'ny fifanarahan'izy ireo raha oharina amin'ny fanatanterahana ilay dredge.
Ny mahaliana indrindra dia ny laboratoara Hydraulic ary modely mararin'ny Farihin'i Maracaibo, any amin'ny tanànan'i Maracaibo miaraka amin'ny Ivontoerana afovoany any Venezoelà. Ny lafiny rehetra amin'ny fandehanana dredging amin'ny fantsona Maracaibo sy ny tetikasa Tablazo dia raisina ho modely amin'ny hydraulic.
Tetikasa fikarohana ao amin'ny MIT (Massachusetts Institute of Technology) sy ao amin'ny INC dia nanao programa fanombanana manokana tao amin'ny Laboratoara Hydraulika amin'ny fomba hafa mifehy ny fantsona Maracaibo. Ny fandalinana natao, mitondra ny lohateny hoe "Fanadihadiana an-tsaha hamaritana loharanom-pahalalana voa sy ny fidiran'ny masinina ao amin'ny Estacazy Maracaibo, Venezoelà," dia niompana tamin'ny fanontaniana maro momba ny fandavahana tany taloha. Anisan'ireo fampiharana ny maodelim-by ho an'ny fandaharam-pitrandrahana drakitra ao Maracaibo ny fanombanana ny vokatry ny fanariam-pako toy ny any Tablazo, ny fihetsika tsy mandeha amin'ny laoniny ao anaty fantsona avy amin'ny fampiakarana ny sidomotika amin'ny Zulia, ary ny vokatra voajanahary amin'ny fanovana ny onja rano amin'ny alàlan'ny fanamboarana ranomasina na fanodinkodinana hafa mankany amin'ny fisondrotan'ny rano mahazatra.
Ny fikambanana INC dia mahomby amin'ny fanatanterahana tetikasa dredging amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny fikarohana, ny fitsapana, ny fanombanana ary ny fandinihana ilay tetikasa. Ny injenieran'ny INC, ny fitantanana, ny fikarohana ary ny asa fanaovana dredging dia ao anatin'ny minitra vitsy avy. Ny fiatraikany ara-bola manamarina ny fananganana ireo fotodrafitrasa dia teo ihany koa niaraka tamin'ny petrabola solitany 700 tapitrisa bararata nafindra namakivaky ny fantsona Maracaibo isan-taona, anisan'izany ireo tanker maherin'ny 3,500 miditra ny farihy, na 7,000 ny lalan'ny fantsona.
Ny INC dia manolotra modely ho an'ny seranan-tsambo lehibe hafa hijerena avy amin'ny fomba fijeriny ny modely hidradrika sy ny mpiasan'ny injeniera akaiky ny seranan-tsambo amin'ireto tranga ireto izay tsy maintsy misy ny fampandrosoana sy ny fanodinana tsy tapaka. Miaraka amin'ny fanamafisana ny fiantraikan'ny loto sy ny ahiahy amin'ny fitrandrahana hanova ny fitondran-tsambo, ny fantsona ary ny angona dia mihatra hatrany ny soso-kevitra. Ny Ivon-toeran'ny Waterville Venezoelana (INC) dia mendrika fankatoavana manokana amin'ny zava-bitany amin'ny fandrosoana ny teknolojia dredging ao Maracaibo.
Nalaina avy amin'ny World Dredging & Marine Construction